Hita ho mifangaro ny endrika politika sy ny lafiny tekinika nandritra ny famindram-pahefana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Hita ho mifangaro ny endrika politika sy ny lafiny tekinika nandritra ny famindram-pahefana
Natao ny talata 6 oktobra 2015 teo ny famindran-draharaha teo aminn'y Pds-n'Antananarivo-Renivohitra sy Lalao RAvalomanana Rakotonirainy, ben'ny tanàna voafidy. Ny lefitry ny prefektiora an’Antananarivo no nitarika ny lanonana.
Tontosa ihany ny famindram-pahefana teo amin’ny filohan’ny delegasiona manokan’ny tananan’Antananarivo, Atoa Ramiaramanana Joseph, sy ny ben’ny tanàna voafidy, Rtoa Lalao Ravalomanana Rakotonirainy.
Manaiky aho satria…
Nanaiky nanatontosa izany famindram-pahefana izany ny lehiben’ny delegasiona manokana, fantatra kokoa amin’ny hoe Pds (Président de la délégation spéciale). “Manaiky hanao ny famindram-pahefana aho satria efa voaraiko ny notification hanaovana izany” hoy ity Pds ity raha niantso ny mpanao gazety ny tenany io talata maraina io. Nosokafany teo imason’ny mpanao gazety ny valopy nisy ilay notification. Tokony ho tamin’ny 9 ora sy sasany teo ho eo izany. “Araka ny hitanareo dia omaly tamin’ny dimy ora hariva sy 19 miniotra no vita sonia ity notification ity ary izao maraina (TTF : talata 6 oktobra) tamin’ny 9 ora mahery kely no voaray teto amin’ny kaominina izany” hoy ny Pds. Hita teo amin’ny taratasy nasehon’i Pds tokoa ireo ora nambarany ireo. “Voaraiko ary dia nanome baiko hanomana ny taratasy mikasika ny famindram-pahefana ao, izaho handeha kely ary dia hiverina eo any amin’ny 11 ora any ho any hanao ny famindram-pahefana” hoy hatrany ny Pds. Lasa tokoa izy. Nandritra ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety dia efa tonga tao ivelany ny ben’ny tanàna voafidy. Satria lasa ny Pds dia niandry tao amin’ny efitra tao ny ben’ny tanàna sy ireo mpiara-miasa akaiky azy ary ireo olona marobe tonga teo antoerana. Tsikaritra isan’ny tonga vonona hanatrika ny famindram-pahefana ny minisitry ny varotra fa raha nandre fa nihemotra ny fotoana hanaovana famindram-pahefana dia lasa izy ary tsy niverina intsony.
Fombafomba fotsiny ve ?
Taorian’ny mitatao vovonana no vita sonia ny antontan-taratasy manamarika ny famindram-pahefana. Tsy tazana mihitsy ny fanaovana sonia ny famindram-pahefana satria dia tao ambadiky ny “comptoir” no nanaovana izany na dia hiarahana mahita aza fa betsaka ny efitrano malalaka azo nanaovana izany famindram-pahefana izany. Maro sy nameno trano ireo te ho vavolombelon’ny tantara (mpanao gazety, mpanara-dia, olon-tsotra…).
Sahirana ireo mpanao gazety nandrakitra an-tsary ny famindram-pahefana satria betsaka ireo olona tsy mpanao gazety tafiditra tao amin’ny efitra izay nanaovana ny “lanonana”. Ankehitriny koa dia samy manana ity fakan-tsary numérique ity ny olona na ny finday azo hakana sary koa ka tsy fantatra izay tena mpanao gazety sy ny mpijirika (hivarotra sary) sy ireo mpanara-dia ihany.
Famindram-pahefana sa famindran-draharaha ? Tokony ho famindran-draharaha ny ilazana ny lanonana tahaka io nataon’ny Pds sy ny ben’ny tanànan’Antananarivo io satria tsy manana fahefana tahaka izay nomena ny ben’ny tanana voafidy ny olona voatendry (na Pds izy na ben’ny tanàna lefitra nandimby izy ben’ny tanàna nametra-pialana satria nirotsaka ho kandida). Sarotra ny manazava izany satria dia ny asan’ny ben’ny tanàna rehetra no nataon’ny Pds teo na izay nisolo toerana.
Ny manaitra dia natao ny famindram-pahefana nisy ny fanaovana sonia boky kanefa dia tsy mba nisy ny fanamarinana mialoha ny voarakitra ao anatin’ny antontan-taratasy nosoniavina. Olombelona no nanao ireny fitahirizan-kevitra sy fitanisana anaty boky ireny ka mety diso. Tahaka izay hita tao amin’ny kaominina tao Ampitatafika raha nilaza ny mpiasa fa misy tsy ampy ny lisitry ny fitaovana voarakitra antsoratra. Ordinatera iray sy kojakoja no tsy voasoratra tao. Tsaroana etoana ity fanamarihana natao-na miaramila manam-boninahitra iray : “Ny antsika eto Madagasikara dia famindram-pahefana sy famindran-draharaha mikajy fihavanana ka soniavina fotsiny any izay boky tonga eo na marina ny ao na tsy marina” hoy ity manam-boninahitra ity. Ho azy dia tsy tokony hisy fanaovan-tsonia famindran-draharaha raha tsy efa voamarina avokoa ny voalaza ao anatin’ny boky firaketana. Tsy voatery ilay manao sonia no hidina hanamarina ny isan’ny bala na isan’ny fantsika na entana hafa fa izay nomeny fahefana hanao izany amin’ny anarany (misy fanomezan-dalana na procuration izany). Vita izany rehetra izany dia raikitra ny fanaovana sonia famindran-draharaha. Afaka manao fanamarihana antsisiny na réserve ilay handray andraikitra. Fa tsy hoe vita ny sonia dia manambara ilay nandray fahefana fa “hanao audit” no sady manao cocktail ihany.
Ela loatra, ela loatra…
Ny fanamarihana farany aroso eto dia lava loatra ny elanelana misy eo amin’ny fotoan’ny fifidianana sy ny fanaovana famindram-pahefana. Ny 21 jolay no natao ny fifidianana ary efa dila ny herinandro voalohany amin’ny volana oktobra vao afaka manao famindran-draharaha ireo voakasika. Misy tsy fahafehezana andraikitra ao. Tsy ny eny amin’ny tontolo misahana ny fifidianana ihany no mitarazoka eto. Ny 18 septambra 2015 no nambara ofisialy ny vokatry ny fifidianana ho ben’ny tanàna sy mpanolotsaina. Tao Antananarivo izany no natao saingy kosa ny 5 oktobra vao niainga ny fampahafantarana ho an’ny Pds-n’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Efa telo herinandro izany vao tonga ny taratasy. Kanefa raha natao dia vitan’olona iray antongotra indray andro ny fanaterana ny taratasy ho an’ny ben’ny tanàna sy ho an’ny Pds. Izay fitarazohan’ny fampitana ny taratasy ofisialy izay no mampiahiahy ary mahalasa ny saina sy hitenenana fa misy ambadika politika ao. Mifangaro ny resaka tekinika momba ny fitantanan-draharaha sy ny kajikajy politika.
Rehefa sahy mampihatra ny fahaizana mitantana ny raharaham-panjakana manoloana ny kajikajy politika ny mpitondra ifotony ary manao toa izany koa ireo ao amin’ny fanjakana foibe dia ho tafita ny firenena. “Mba rahoviana re…” hoy ny tonon-kiran-dry Mahaleo sy ny tariny.
Conjoncture politique : L e Gouvernement Ntsay démissionne - il y a 10 heures
3è place – CAN 2019 : Les Super Eagles volent plus haut que les Aigles de Carthage - il y a 13 heures